Nhọrọ ctionkpụrụ nke Ball Valves Tydị Nrụpụta Ihe-Nka na ụzụ-Zhejiang Huaxia Flow Technology Co., Ltd (Titan valve bụ akara anyị)
Ctionkpụrụ Nhọrọ nke Ball Valves Balldị Mwube
Oge: 2020-10-09 Hits: 84
Bọọlụ valvụ nke dabere na iwu bọọlụ nwere ụdị abụọ: sere valves na trunnion ndokwasa bọl valves. N'ihi ụdị bọọlụ abụọ ahụ, bọọlụ na-ese n'elu mmiri na bọọlụ ahụ bọọlụ. Ọzọkwa abụọ ndị a iche iche nke bọl ewu, bọl valves nwekwara ụfọdụ ndị ọzọ bọl ụdị dị ka hemisphere ụdị, ndị V ekara ụdị, na eccentric ụdị na orbital ụdị (obi ụtọ na-ewere siwing edinam), nke bụ ụdị patented ụfọdụ ndị na-emepụta ihe.
Bọlụ Na-ese n’elu mmiri
Valve na-ese n'elu mmiri nwere usoro dị mfe ma mechie ya n'ike site na nrụgide akara nke nrụgide nke mgbapụta ahụ mepụtara. Ihe ndị na-ese n'elu mmiri adịghị mma maka oge nwere nnukwu paịpụ, ma ọ bụ na ha ga-adị oke oke ọrụ ma ọ bụ ọbụlagodi enweghị ike ịkechi ma ọ bụrụ na nrụgide nke ọkara dị ala ịkwanye bọọlụ ahụ. N'okpuru ọnọdụ ndị a na-ahụkarị, a na-edekọ nchikota akara nrụgide na dayameta maka valvụ na-ese n'elu mmiri dị ka ndị a.
A. Class150: Ruo DN300
B. Class300: Ruo DN250
C. Klas600: Ruo DN150
Ọ bụrụ na e mebere ahụ valvụ bọọlụ na oche valvụ nke ọma na ogo kwesịrị ekwesị, a ga-ejikwa valvụ na-ese n'elu mmiri mee ihe maka ọnọdụ nnukwu dayameta ruo DN300.
Ihe na-ese n'elu mmiri nwere ike ịnwe otu ụzọ emebere akara ma ọ bụ ntụzịaka ụzọ anọchi ya dabere na ebumnuche ngwa. Ihe bara uru nke otu uzo a kara aka na oche oche bụ na nrụgide dị na oghere valvụ nwere ike belata ozugbo.
Nchịkọta dị n'elu nke nrụgide nrụpụta na dayameta maka valvụ bọọlụ na-ese n'elu mmiri abụghị nhọrọ ndabara nke ndị nrụpụta valvụ niile. Mgbe ọ dị mkpa ịnabata ụdị bọọlụ ndị ọzọ, ekwesịrị igosi ya na mpempe akwụkwọ data valvụ ahụ.
Trunnion guzobere Ball
A na-emechi valvụ a na-etinye na trunnion site na nrụgide akara nke isi valvụ ahụ na oche valvụ na-ese n'elu mmiri na-akwado. Ejiri oche oche, mgbanaka akara, mmiri na-akwado ya, wdg, oche valvụ ahụ na-ese n'elu mmiri nwere usoro dị mgbagwoju anya na nnukwu nha. Agbanyeghị, valvụ bọọlụ Trunnion nwere oke dị elu na enwere ike ịchigharị ya na-enweghị nrụgide nke ndị na-ajụ ya, ọ nwere ike ịnwe arụmọrụ akara a pụrụ ịtụkwasị obi. Ọ nwekwara ike ịbụ n'ụzọ dị mfe ụzọ abụọ. Ihe ndị a niile na-eme ha ugboro ugboro maka ọnọdụ nnukwu dayameta.
Ọ bụrụ na enweghị mkpa pụrụ iche na valvụ bọọlụ trunnion, ha enweghị ike belata nrụgide na cavities n'onwe ya. Ya mere, mgbe enwere ụfọdụ ihe achọrọ, ekwesịrị igosi ya na mpempe data valvụ.
Ọzọ: Ihe na-ese n'elu mmiri na Valve Ball Trunnion Mounted Ball Valve Pressure Test Usoro